Maxay Tahay Shaqada Ciidamada Mareykanka Ee Ku Sugan Soomaaliya? | Gaaroodi News
Madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ayaa mar kale carrabka ku adkeeyay in dalkiisa uu u baahanyahay taageerada milateri ee uu Mareykanku siiyo.
Madaxweyne Farmaajo ayaa farriin uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka waxa uu ku sheegay in taageerada milateri ee uu Mareykanka dalkiisa siiyo ay u suuragelisay Soomaaliya inay si wax ku ool ah ula dagaalanto ururka Al-Shabaab, ammaan-na laga dhigo Geeska Afrika.
Madaxweynaha waxa uu intaasi ku daray in howlahaas laga guul gaari karo oo kaliya haddii uu sii socdo xiriirka dhanka ammaanka ee Mareykanka iyo Soomaaliya ee ku salaysan taageerada aasaasiga ah.
Hadalka madaxweyne Farmaajo ayaa yimid xilli toddobaadkan ay warbaahinta Bloomberg daabacday warbixin ay ku sheegayso in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu qorshaynayo inuu ciidammada dalkiisa ka soo saaro Soomaaliya.
Warbaahinta Bloomberg ayaa waxa ay soo xigatay qaar ka mid ah lataliyayaasha sare ee madaxweyne Trump, waxaana lagu sheegay in arrintaas uu Trump ku doonayo inuu ku xoojiyo ololihiisa dib u soo doorashada.
In ciidammada Mareykanka laga soo saaro daafaha dunida oo dalkooda dib loogu celiyo ayaa qeyb muhiim ah ka aheyd ballanqaadyadii uu Aqalka Cad ku soo galay Mr Trump. Ciidamada Mareykanka ayaa howlgallo ka wada dalal kala duwan oo ka tirsan Afrika
Hasayeeshee dadka faaqida arrimaha milateriga ayaa ka digaya in si degdeg ah ciidammada Mareykanka looga soo saaro meelaha ay saldhigyada ku leeyihiin, taasi oo horseedi karta inay fursad ka helaan kooxihii ay la dagaallankooda gacanta ka gaysanayeen.
Dhanka kale afhayeenka Taliska Milateri ee Mareykanka u jooga Afrika, Korneel Christopher P. Karns, ayuu wargeyska New York Times ku warramayaa inuu iska diiday inuu ka hadlo qorshaha uu madaxweyne Trump ciidammadiisa Soomaaliya uga soo saarayo.
Wargeyska ayaa isagoo soo xiganaya Korneelka waxa uu sheegay inuu difaacay howlgalka haatan socda.
“Taliska Milateriga Mareykanka ee Afrika ayaa waxa uu sii wadaa inuu tababaro ciidammada Soomaaliya, oo uu la socdo dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab sidoo kalana uu hoos u dhigo halista shabakadda argagixisada Al-Shabaab kuwaas oo ujeedkooda fog uu yahay inay weerrarooda gaarsiiyaan illaa Mareykanka,” ayuu ku yiri bayaan uu soo saaray oo uu wargeyska New York Times daabacay.
Waxaa la sheegaa in dhowr boqol oo askari ay Mareykanka ka joogaan waddanka Soomaaliya, kuwaas oo intooda badan tababara ciidammada Soomaaliya, sidoo kalana waxa ay fuliyaan weerrarada loo adeegsado diyaaradaha aanay cidina wadin ee lagu qaado goobaha looga shakisanyahay inay ku xooggan yihiin dagaalyahannada Al-Shabaab.
Maxat tahay howsha ay Milatariga Mareykanka u joogaan Soomalaiya?
Ciidamada Mareykanka ee ku sugan Soomaaliya waxay wadashaqeyn la leeyihiin kuwa AMISOM ee ka socda Midowga Afrika, Soomaaliyana ku tagay qaraar kasoo baxay Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay.
Bishii April ee sanadkii lasoo dhaafay ayuu madaxweyne Donald Trump saxiixay wareegto uu ku kordhinayay xilliga ay ciidamada Mareykanka howlgallada gaarka ah u joogayaan Soomaaliya, isagoo ku daray hal sano oo kale. Ciidamada ajaanibta ah ee Soomaaliya ku sugan ayaa qeyb ka ah sugidda amniga iyo la dagaallanka al-shabaab
In ka badan saddex sano ayey koox Mareykan ah oo howlgal khaas ah loogu talagalay ku sugan yihiin Soomaaliya. Shaqada ugu badan ee ay hayaan waa inay dowladda Soomaaliya ka caawiyaan arrimo ay ka mid yihiin:
Caawinta dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab
Tababarka ciidamada milatariga ah
Saraakiisha milatariga ee Mareykanka ayaa abuuray ciidamada kumaandoonka soomaaliya ee loo yaqaanno Danab, kuwaasoo ay tiradooda kor u dhaafeyso 3,000 askari.
Weerarradaas oo la kala fuliyay bilihii January, February, March, April, July, August, October, November iyo December ayaa lagu dilay in ka badan 200 oo ka tirsan xubnaha Al-Shabaab iyo dad shacab ahba